GUDAN: SHARAXAAD KA MID AH DIGAAGGA EE DIGAAGGA IYO ASTAAMAHA, SIDA LOO KORO OO AY KU JIRTO, ISKU DHEELITIRNAANTA - BEERAHA DIGAAGA
Abbaanka qurxinta leh taariikh qani ah - Digaagga Goudan
Digaagga Goudan waa mid ka mid ah noocyo badan oo qurux badan oo qurxoon oo leh taariikh qani ah oo ilaaliyey ujeeddadeeda shaqo.
Tani waa la yaqaan oo soo jiidasho leh oo kaliya ma aha muuqaalka aan caadi ahayn, taas oo ka dhigaysa xariiqa culeyska ra'yiga ku saabsan dhismo kasta, laakiin hilibka cad, oo lagu daray wax soo saarka ukun dhexdhexaad ah iyo xadka.
Digaagga waxaa loo rarey in ay soo saaraan hilibka hindida ee Faransiiska, waxa loo yaqaan magaca Guled oo ah meeshii lagu guulaystay tan iyo 1850.
Digaagga Brabant, Krevkers, La Fresh, Digaagga Fareemada, Caumont, Gournay, Le Mans, Caux, Merleaux, Mentes ayaa ka qaybqaatay doorashada xulashada. Si loo wanaajiyo caleemaha, dhiigga Dorking, Bram, iyo shimbirta Nederlandka ah ee White-tailed ayaa lagu daray.
Laga soo bilaabo 1870, caanaha ayaa lagu yaqaanaa meel ka baxsan Faransiiska, marka ugu horeysa ee Jarmalka (badankooda la yiraahdo curyaamada Yurub ayaa wali laga keenaa wadankan, waxaad kaloo soo dhoofin kartaa Guddiga Danansan ee Danes).
Intii lagu jiray dagaalkii labaad ee dunida, digaagga purebred ee guud ahaan Yurub waa la waayay, sidaas darteed naasku waa in dib loo dhiso ka dib dagaalka.
Hadda waa halkii lagu qurxiyo oo leh awood u leh inay u isticmaasho sida ukunta iyo hilibka guud, inkastoo celceliska ukunta, hilibka dhadhan fiican leh waa qiimo weyn.
Tafaasiisha guud ee Guled ee taranka
Gudan waa nooc nooc oo hilib ah, waa shimbiro dhexdhexaad ah oo leh jidhka cylindrical.
Muuqaal muuqaal ah ayaa ah xayawaanka cagaaran ee madaxa iyo shanlalka qaabka aboorka. Xooluhu waa inuu ahaadaa mid weyn, laga bilaabo baaluq dheer, dib u dhaco oo aan ku haboonayn xitaa si adag u xajinta madaxa shimbirta.
Madaxa waa weyn, oo leh barar barar ah oo qoorta ah - saldhigga tuft. Beak giigsan, gaaban.
Foornada buunshaha waxaa sameeya laba taaj oo siman leh ilko dhexdhexaad ah, midabku waa mid casri ah, casaan dhalaalaya. Gadhka wuxuu ka kooban yahay qayb ka hooseysa gogosha, iyo laba qaybood oo ka samaysan weelasha. Qoorta waa dherer dhexdhexaad ah oo daboolan leh, waa inuu noqdaa mid xoog badan oo xoog leh.
Jidhku waa mid sarreeya, qaab ahaan silsilad, laakiin ballaaran, wax yar oo sarreeya, jidhkuna waa inuu noqdo mid si qotodheer u eg. Xabadku waa mid buuxa oo ballaaran, caloosha ayaa lagu soo koobay. Dhanka dhabarku waa inuu noqdaa xumbo leh lumbar.
Baalalku waa mid dhexdhexaad ah, oo ku xiran jirka. Qulqul la'aan barkimooyin, jilicsan. Daboolka ayaa ah mid yaryar, oo leh boogo yar yar.
Noocyada kala-guurka ayaa iska leh fasalka hilibka iyo digaaga ukunta. Waxaad baran kartaa sifooyinka muuqaalka boggeena.
Si aad u aragto sida loo sameeyo masruufka leh gacmahaaga gacanta, gal halkan.
Lugaha ayaa qayb ahaan lagu daboolay dalool, xoog leh. Maadada gaaban oo gaaban oo gaaban. On the paw, shan farood, faraha shanaad iyo faraha afraad waa in si fiican u kala soocaan, farta shanaad wax yar koray.
Midabada la oggol yahay: caddaan, madow iyo caddaan iyo buluug. Madow iyo caddaan ah ayaa lagu qaddariyaa, iyadoo madow ay ku badan tahay midabka duufaanka, digaagdarrada ayaa si siman u rinjiray.
Iyadoo midab cad, waa loo oggol yahay in uu ku yareeyo hareeraha inuu yeesho midab yar oo midab leh oo ku jira cayayaanka iyo gadhka. Marka midabka midabkiisu yahay buluug, midabku waa inuu noqdaa mid isku mid ah, dhibco cad ayaa loo oggol yahay xayndaabka, xajka iyo xargaha cirridku waxay noqon karaan madow, guud ahaan, qoob-ka-shaqeeyayaashu waa muraayado yar oo ka hooseeya digaagga.
Ruushka, mararka qaar hoos yimaada gunta ee Gudanov, digaagga oo leh qaab kale oo kiriim ah ayaa la bixiyaa; shimbirahaas oo kale laguma tirin karo sida Guddiga saafiga ah; Ka taxadar saxda ah midabka, midabka guud ee shimbirta. Gudanov wuxuu leeyahay silhouette qaab la aqoonsan karo, sidaas darteed digaagga jilicsan ayaa si fudud loo kala qaadi karaa.
Cilladaha: ugu horeyn jirka oo dhan jirka oo daciif ah, sidoo kale qaloocinta calaamadaha - xajin liidan, booska khaladka ah ee cayayaanka iyo gadhka, midab khalad ah (waxaa ku jira baalal jaalle ah oo caddaan ah gadhka iyo dhabarka dambe - tani ma aha mid la aqbali karo).
Naxariista caanaha, sababtoo ah waxa loo qaaday dareenka aqoonta cuntada ee Faransiiska - hilibka cad ee hindida. Geedka boodhka ah ee Gudan waa mid si fiican u murugaysan, shimbiraha waa isku-baddan, roonaan iyo xoog badan.
Gudan ayaa leh moodada jilicsan, aad u dhaqdhaqaaqa, Sidaa darteed, waxay u muuqan doontaa mid weyn oo ku saabsan xayeysi bilaash ah oo ku yaala beeraha. Dadku waa saaxiibtinimo, kalsooni, waxay haystaan ​​xasilooni, maaha kuwo khilaafsan.
Digaagga waxaa loo isticmaalaa sida qurxinta, laakiin asal ahaan ka soo jeeda waxay u ogolaanayaan naas nuujinta digaagga iyo digaagga kor u qaada hilibka. Iyadoo loo eegayo xajmigooda yar, guddiga gudniinka ayaa ku habboon oo kaliya sida dalxiiska.
Hadda waxaad haysataa fursad aad ku aragto digaagga cajiibka ah ee sawirka. Labada kowaad waxay sawiriyeen 2 qof oo qurux badan oo kuwan ah.
Tani waa sida ciyaalku u eegaan qaabka ugu wanaagsan. Quruxdiisa oo aan sheegin ereyada:
Tani waxay hore u ahaan jirtay haween. Isbarbardhiga sawirada, waxaad aragtaa farqiga u dhexeeya cirridka iyo kuraasta.
Dabcan, goobta ugu caansan ee shimbiraha waa adiga laftigooda:
Kobcin iyo dayactir
Cimiladu waa mushkilad wayn oo lagu ilaalinayo digaagga xaaladaha Ruushka.
Digaagga hagaagsan ee noocaan ah wuxuu asal ahaan ka qaataa bartamaha Ruushka iyo aagagga diiran, xaaladaha adag ee shimbiraha dhirta dheer u baahan yahay coop diiran diiran.
Garsooraha oo khibrad u leh inuu ku guulaysto Goudan ee dalkeena waa mid macquul ah, laakiin tani waxay u baahan tahay dadaallo dheeraad ah si loo hubiyo xaaladaha cakiran - caanaha ayaa loo rogrogay si diiran marka loo eego cimilada Faransiiska.
Beeralayin badan oo digaaga ah ayaa ku hawlan taranka (isku dayga in la jaangoyno nadiifinta Gudanov ayaa la sameeyay tan iyo 80-kii illaa iyo waqtigeena), waxay ogaadaan in heerka badbaadada ee shimbiraha yar yar iyo kan qaangaarka ah aaney aad u sarreeyn.
Waa inaad sidoo kale muujisaa walaac dheeraad ah ee Gumanka raaxada leh. Qashin ee guriga hoyga waa in ay ahaato mid cufan oo had iyo jeer nadiif ah.haddii kale shimbirku si dhakhso ah ayuu u qaadan karaa si aan caadi ahayn oo aan la arki karin.
Wixii shimbiraha midabka caddaanka ah, waxyaabaha la xaday ama lugaha ayaa la doorbidaa: meel bannaan oo u dhow, wax kasta oo dhalaalaya ayaa si dhakhso ah u noqda mid aan is qabsan oo bilaabmaa inuu dhaco.
Gudan ma laha dherer sare oo sare, sidaa darteed, si loo ilaaliyo xayndaabka qulqulka leh. Shimbirku wuxuu leeyahay dabeecad xasiloon oo aan u badneyn inuu keeno wax dhibaato ah oo ku jira mawduuca.
In cuntada cunto aan qabyo ahayn, qaababka ee barbaarinta dhalinyarada. Laakiin waa in maskaxda lagu hayaa in xilliga dayrta iyo xilliga qaboobaha ay lagama maarmaan tahay in la xoojiyo cuntada oo shimbiraha leh nafaqooyin. In digaagga, dareenka kulaylka ayaa si dhexdhexaad ah loo horumariyo, ee kala duwan ee ciibaha, waa ka sii xun.
Gudan - digaag dhexdhexaad ah, miisaan culus - 2.5-3 kg, digaag - 2-2.5 kg. Wax soo saarka ukunta - 160 ukumo sanadka ugu horeeya, 130 - qiyaasta labaad ee cusbada ukunta - laga bilaabo 53 g, midabka ukunta - cadaan.
Cawska cagaarka ayaa leh miisaan hoose: qiyaastii 1.1 kg ee lakabka iyo 0.9 kg digaag.
Gudany waxaa si aan kala go 'lahayn looga furfuray Ruushka, waxaa jira qaar ka mid ah beeraleyda oo la macaamilaya caanahan oo ku yaala Ukraine, halkaas oo cimiladu u ogolaato Gudansi inuu dareemo raaxo.
Laakiin haddii aad rabto inaad ka iibsato hilib ama jilid caam ah oo leh muuqaal xiiso leh, ma jiraan wax fursado badiil ah:
Dalagyo badan oo dalkeena ka jira ayaa jira digaagga hilibka Cochinkhin hilibka.
Cunto qadiim ah ayaa loo soo bandhigay Yurub ka soo Shiinaha waxayna u adeegtay saldhigga hilibka iyo ukunta iyo hilibka badan. Plus kokhinhinov - miisaanka ilaa 3.5 kg oo leh ukunta wax soo saarka ee 120-140 ukumaha iyo muuqaalka aan caadi ahayn, muuqaal ahaanba qaro weyn sababtoo ah boodhka jilicsan ee caanaha iyo bulaacada bullaacada isla markiiba soo jiidata.
Caleemo kale oo caan ah, ku haboon loogu talagalay taranta hilibka, helitaanka ukunta iyo sida quruxda loogu talagalay beerta - Brama.
Dhamaan noocyada Brahma waxaa la helay iyadoo la mariyo Cochinquins oo leh caleemaha kale ee lo'da; Brahmans oo ka yimid Cochinchins ayaa barta baaluqyada la aqoonsan yahay, farqiga ugu weyn ee culeyska jirka (ilaa 5.45 kg oo qiiqo ah).
Malaha ugu weyn ee haadku waa lafaha weyn ee Jersey. Soo ogow inta uu le'eg yahay waxa uu gaari karo!
Cinwaanka //selo.guru/sadovodstvo/vinograd/vinograd-v-podmoskove.html waa maqaal aad ka heli karto noocyada sabiibta ee gobolka Moscow.
Cuckoo Mechelen (waxaa kale oo loo yaqaan 'Meklin', Mehlen, Malin iyo noocyo badan oo kala duwan oo magaciisa rasmiga ah) - hilibka hilibka leh ee la helay sawirkii asalka ahaa ee laga helay, Belgium, laakiin taranka lo'da ee laga isticmaalo Shiinaha iyo Maraykanka, marka miisaanku qiyaaso 5 kg, oo leh hilibka jilicsan.
Gudan - dhif iyo aan caadi ahayn muuqaalka muuqaalka, kaas oo qurxin doona dhismo kasta. Shaki la'aan waa hilibka jilicsan, iyo heer aad u sareeya ukumo-gelis ah ayaa kuu ogolaanaya inaad sii haysato Gudanov sida jilid caalami ah.
Conss: qaar ka mid ah macquul ah oo aan ku haboonayn xaaladaha adag ee soo-baxayaasha Ruushka, oo u baahan qalab ah nidaamka kulaylka coop, iyo dhibaatada in laga helo Russia.